Global Voices teny Malagasy » #NyRarinyHoan’IAsifa: Tohina Tamin’ny Famonoana Ny Tovovavy Iray Ny Mponina Tao Jammu Sy Kashmir Saingy Tsy Toy Izany Kosa Ny Fampitam-baovao Nasionaly · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Febroary 2018 6:29 GMT 1	 · Mpanoratra Vishal Yashoda Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsimo, India, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Mivaky toy izao ny soratra eo amin'ny afisy : “Delhi … Matahotra ny hivoaka ny tranony ny vehivavy eto. Iza no tompon'andraikitra amin'izany fahatahorana mafy izany? “Sary avy amin'i Francois Decaillet tao amin'ny Flickr. CC BY-NC-ND
Raha mbola mitolona amin'ny fitsarana momba ilay tompon'andraikitra tamin'ny famonoana ilay zazavavy kely fito taona Zainab Ansari  i Pakistana dia efa nisy sahady ny famonoana tamin'ny fomba habibiana iray hafa tany amin'ny sisintany, any amin'ny fanjakana Indiana avaratra any Jammu sy Kashmir izay nahatohina ny mponina tao an-toerana.
Tamin'ny 17 Janoary, hita tao anaty ala iray tany amin'ny faritra Hiranagar, any Jammu sy Kashmir, any amin'ny distrikan'i Kathua ny vatana mangatsiakan'ilay zaza valo taona Asifa Bano novonoina. Nilaza ny tati-baovao tao amin'ny gazety tao an-toerana  tao Kashmir fa toa niharan'ny fanolanana sy nampijaliana i Asifa talohan'ny namonoana azy, ary nisy marika vono nataon'olombelona teo amin'ny vatany.
Tsy hita nandritra ny herinandro i Asifa Bano talohan'ny nahitana ny vatana mangatsiaka. Nilaza tamin'ny fampitam-baovao tao an-toerana  ny fianakaviany fa nitatitra avy hatrany ny vaovao izy ireo rehefa tsy hita izy ,kanefa nilona loatra ny fanadihadiana nataon'ny polisy momba ny fanjavonany. Anisan'ny foko mpifindrafindra monina Gujjar-Bakarwal  i Asifa sy ny fianakaviany.
Samy nitaky ny fitsarana ny famonoana an'i Asifa tamin'ny fomba habibiana avokoa na ireo manampahefana tao an-toerana na ny olom-pirenena na ny mpanao gazety tao Jammu sy Kashmir ary nampitaha ny zava-misy mitovy tamin'ny famonoana an'i Zainab Ansari tao Pakistana. Misy ihany koa ny fitakian'ny vahoaka ny rariny  ho an'ilay zaza.
Hoy i Shujaat Bhukari, toniandahatsoratry ny Rising Kashmir  monina ao Kashmir raha nanoratra hoe:
Raha misy manontany ilay vaovao mampalahelo mikasika ny fakàna an-keriny, ny fanolanana ary ny famonoana an'i Asifa Bano 8 taona tao Kathua, habibiana tsy hay lazaina izany. Mampalahelo fa tsy misy fetrany ity habibiana ity.
Nisaintsaina  momba ilay zava-nitranga sy ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina i Nadir Ali, mponina ao an-toerana:
Mikomy ny fanahin'i Jammu sy Kashmir .. Naolana sy novonoina ny zanakavavy 8 taona. Ho aiza isika??? Miverina any amin'ny hoavy ve isika?? Mila miara-mijoro isika rehetra ary manome ny rariny ho an'ny fianakavian'i Asifa.
Nanoratra ny mpianatra mpitsabo iray avy ao Kashmir, Mehreen Syed hoe:
Tsy haiko lazaina ny zavatra tsapako amin'izao fotoana izao … heloka bevava feno fankahalana ity nitranga ity ary maniry ireo meloka mba hahazo sazy henjana aho mba tsy hisy olon-kafa ho sahy hieritreritra ny hanao tahaka izany indray koa.
Nanoratra i Guftar Ahmed, mpikatroka ara-tsosialy hoe:
Rehefa mahazo ny rariny i Asifa. Nihazo an'i Kathua hanatontosa hetsi-panoherana maro ao amin'ny Distrika ho an'i Asifa
Saingy eo amin'ny sehatra nasionaly, mahalana ny fihetseham-po tamin'ny zava-nitranga, Indiana maro no tsy naneho hevitra na nanao hetsi-panoherana manohitra ilay famonoana mahatsiravina. Tsy nisy ny diabe niaraka tamin'ny labozia na ny fanangonan-tsonia hitakiana rariny nitranga tamin'ireo famonoana hafa tsy misy dikany .
Tsy mbola nitatitra momba ilay tranga ny tambajotram-baovao goavana toy ny Zee News, Times Now ary Republic, izay fantatra amin'ny fanohanany ny governemanta. Loharanon'ny adihevitra mafana indrindra miaraka amin'ny tenirohy malaza sy ny famoaham-baovao lava matetika ny tantara toy izany, indrindra moa fa rehefa mitranga any amin'ny faritra an-drenivohitra izany. Saingy tamin'ity tranga iray ity dia tsy nahitana teny firy ny firenena raha avy any amin'ny faritra lavitra any Jammu sy Kashmir ilay niharam-boina sady avy amin'ny vondrom-piarahamonina vitsy an'isa.
Nanakiana ireo gazety fampitam-baovao tao an-toerana izay tsy nahavita nitatitra ilay raharaha ny mpanao gazety Majid Hyderi tao amin'ny Facebook :
Ny gazety ao an-toerana izay tsy nitatitra momba ny fanolanana sy ny famonoana mahatsiravina an'ilay zazavavy valo taona tao amin'ny pejy voalohany, dia tsy inona fa Gazety tsy misy ilàna azy na Dalla-e-Sahafat. Natao toy ny tatitra famonoana olona mahazatra ao amin'ny pejy anatiny sady tsy misy filazana momba ny fanolanana ny voina nitranga tamin'ilay zazavavy Gujjar, izay tsy mba manana fianakaviana mahitahita loatra mba hitadiavana ny rariny.
Mbola nanao fanamarihana manandanja indray i Hyderi  momba ilay vono olona sy fanolanana mahatsiravina:
Mangina isika rehetra satria tsy zanatsika vavy na anabavintsika izany na angamba tsy avy amin'ny vondrom-piarahamonina na ny foko misy antsika izy; Tsy ao anatin'ny tontolo mampifoha ny fanahintsika izy.
Aoka isika tsy hampitovy ny voina mampivarahontsana toy ny zava-mitranga amin'ny Haindò, ny Miozolomana, ny Sikh na ny Kristiana; Raha tsy hoe angaha mijoro manohitra ny heloka bevava toy izany amin'ny feo tokana tsy manavaka fivavahana na finoana hafa isika olombelona, mbola hitohy ny fanaovana lasibatra ny zanakavavin'ny olon-kafa.
Manomboka izao, aoka isika hilanja loha amin'ny henatra iombonana. Miala tsiny, Asifa fa tsy nanao na inona na inona ho anao izahay satria tsy ao anatin'ny tombontsoanay ny fanolanana sy ny famonoana natao anao!
Tao amin'ny Antenimieran'ny Jammu sy Kashmir, nikarakara fihetsiketsehana diabe  manohitra ilay famonoan'olona ny antoko politika mpanohitra, National Conference (NC) raha nanambara kosa ny antokon'ny fitondrana fa hanao fanadihadiana haingana. Nanameloka ilay zava-nitranga ny lehiben'ny minisitra ao Jammu sy Kashmir, Mehbooba Mufti, ary nitaky ny hanaovana fanadihadiana haingana. Ankizilahy iray 15 taona  no nosamborin'ny polisy tamin'ny famonoana.
Naha-tohina ny zava-niseho feno habibiana izay nahitana ny tovovavy kely Bakerwal iray namoy ny ainy. Tokony hanaovana fanadihadiana haingana ny voina toy izany ary homelohina ireo meloka.
Ny famonoana vehivavy
Nandritra ny tapa-bolana lasa izay, nanery ny governemanta sy ny fampitam-baovao hifantoka momba ny olana ity tranga ity sy ny famonoan'olona iray hafa  , niaraka tamin'ny andianà fanolanana miisa folo  tany amin'ny faritra Haryana. Vehivavy an-jatony no niharan'ny herisetra ara-nofo  nataon'ny jiolahimboto nandritra ny alin'ny taombaovao taona 2017 izay nitarika hetsi-panoherana goavana nanerana ny firenena.
Tsy zava-baovao ny olan'i India momba ny fanolanana sy ny herisetra atao amin'ny vehivavy . Nanomboka tamin'ny taona 2001, tranganà heloka bevava atao amin'ny vehivavy miisa 143.795 no notaterina ary nanatri-maso ny fitomboan'ny herisetra isan-taona atao amin'ny vehivavy i India satria dia nahatratra tranga miisa 337.992 izany tamin'ny taona 2014. Ary niha-nitombo hatrany ny tarehimarika nahitana vehivavy sy ankizivavy niha-maro kokoa tonga nitatitra ny tranganà herisetra ara-nofo sy fanolanana.
Mandritra izany, maro no mbola manontany ny antony tsy naha-taitra an'i India momba an'ilay famonoana  an'i Asifa tao Jammu sy Kashmir. Nahoana no nisy ny famerana tatitry ny fampitam-baovao an'ity heloka bevava ity? Mbola lavitr'ezaka amin'ny fiarovana ny zo sy ny fiarovana ara-batana ny vahoaka Indiana – indrindra ireo vehivavy sy tovovavy – ny fitsipika sy ny fenitra izay mifehy ny rafitry ny lalàna sy ny fitantanana ao India.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/01/114306/
 zazavavy kely fito taona Zainab Ansari: https://globalvoices.org/2018/01/13/pakistanis-demand-justiceforzainab-7-year-old-raped-and-murdered-in-kasur/#
 gazety tao an-toerana: http://www.risingkashmir.com/news/justice-for-ashifa--body-of-ashifa-recovered
 Nilaza tamin'ny fampitam-baovao tao an-toerana: https://scroll.in/latest/865614/jammu-and-kashmir-eight-year-old-girl-allegedly-raped-tortured-and-murdered-in-kathua
 foko mpifindrafindra monina Gujjar-Bakarwal: https://en.wikipedia.org/wiki/Bakarwal
 nikarakara fihetsiketsehana diabe: http://risingkashmir.com/news/opp-stage-walkout-over-persecution-of-gujjar-and-bakerwal-community
 Ankizilahy iray 15 taona: http://www.greaterkashmir.com/news/jammu/15-year-old-boy-accused-of-murdering-kathua-girl-arrested-govt/272787.html
 famonoan'olona iray hafa: https://scroll.in/latest/865080/haryana-body-of-dalit-girl-with-19-injuries-found-in-jind-medical-exam-reveals-gang-rape
 andianà fanolanana miisa folo: http://www.firstpost.com/india/10-rapes-in-10-days-in-haryana-woman-allegedly-raped-in-gurugram-while-husband-brother-in-law-held-at-gunpoint-4315557.html
 niharan'ny herisetra ara-nofo: https://globalvoices.org/2017/01/03/crowds-assault-women-during-new-years-night-of-shame-in-bangalore/
 fanolanana sy ny herisetra atao amin'ny vehivavy: http://www.atimes.com/article/rapes-go-unreported-india/